Khabar Break - यो देशका नेताहरुले कहिल्यै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीति गरेनन् : भिमसेन महत
Thursday 19th of October 2017, 5:48:07 am
अन्र्तरवार्ता Published On: Monday 14th of November 2016, 05:37 PM
नेपालमा पछिल्लो सयमा राष्ट्रियता विषयमा चर्को बहस हुने गरेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भुकम्पले थलिएको नेपालमा भारतले आफ्नो स्वास्र्थको लागि नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा राष्ट्रियताको आन्दोलनले चर्को रुप लियो । ‘बरु भौकै मरिन्छ तर स्वभिमानलाई मर्न दिइन्न्’ भन्दै नेपालीहरु सडकमानै उत्रीए । अहिले नेपालमा राष्ट्रियता एउटा प्रमुख मुद्धा बनेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै मकवानपुरमा रहि राष्ट्रियताको विषयमा विभिन्न कार्य गर्दै आउनुभएका, राष्ट्रियताको सवालमा जागरण अभियान समेत सञ्चाल गर्नुभएका नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य तथा समाजसेवी भिमसेन महतसँग खबर ब्रेकको लागि सम्पादक धर्मेन्द्र दाहाल र उज्जवल अधिकारीले गरेको कुराकानी
पछिल्लो समयमा नेपालमा राष्ट्र विरोधि काम किन बढिरहेको छ ?
– वास्तवमा नेपालमा हुने हरेक परिवर्तको समयमा भारतले आफ्नो हैसियत खोज्ने गरेको छ । भारतले पहिला आफ्नो एजेन्ट परिचालन गरि भारत विरोधि नै काम गर्न लगाउने , भारत विरोधि एजेण्डाहरुलाई राजनीतिक दल मार्फत जनता समक्ष पु¥याउने र राष्ट्रवादी भन्दै लोकप्रियता हासिल गर्ने । लोकप्रियता हासिल गरेपछि जब सरकार अथवा निर्णायक तहमा पुगिन्छ , तब सम्पूर्ण रुपमा भारतको एजेन्टकै रुपमा काम गर्ने, भारतको एजेण्डाहरुलाई सरकारबाट पास गराउने लगाएतका काममा भारत सधै सकृय रहेको छ । जस्तै उदाहरणको लागि जनयुद्ध सुरु गर्नु पूर्व बाबुराम भट्टराईले सरकार समक्ष राखेको ४१ बुँदे मागहरुमा करिब ३०–३२ बुँदामा भारतको विरोध गरिएको छ र त्यसैलाई आधार बनाएर जनयुद्ध सुरु गरिएको देखिन्छ । तर त्यसपश्चात शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरेपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए , उनले सम्पूर्ण निर्णयहरु भारतको पक्षमा गरेको देखिन्छ । त्यो चाहे बिपा सम्झौता होस्, चाहे नेपालको १६ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिने निर्णय होस् । यी सबै निर्णयबाट भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट देखिन्छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र विरोधि काम हुनुमा उसकै प्रमुख हात र भारत परस्त नेताहरुको चरित्र प्रमुख रहेको छ।
भनेपछि नेपालमा पछिल्लो समयमा भएको राष्ट्र विरोधि काम भारतै डिजाइनमा भएको हो त ?
– एकदमै हो , माओवादी जनयुद्ध कालमा ८० प्रतिशत समय माओवादी नेताहरु भारतमा बसेका छन् । यदी भारतले चाहेको हो त माओवादी युद्धले यो उचाइ हासिल गर्ने थिएन, तर त्यसमा भारतको समर्थन र सहयोग रहयो । जब भारतमा नै माओवादीको समस्या बढ्न थाल्यो , तब भारत आत्तिएर आफ्नै सहभागितामा हैसियत देखिने गरी भारतको राजधानी दिल्लीमा १२ बुँदे सहमती गराइयो र नेपालको द्वन्दलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजीयो । त्यसपश्चात भारतले माओवादी नेतृत्वको सरकार मार्फत आफ्नो एजेण्डाहरुलाई पास गर्न क्रियाशिल रहेको देखियो । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ की नेपालमा हुने हरेक प्रकारका राष्ट्र बिरोधि निर्णयहरु भारतकै डिजाइनमा हुने गरेको छ ।
त्यसो भए नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर कुनबेला देखि भयो त ?
– राष्ट्रियताको सवालमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न समयमा कठोर प्रहार भएका छन् । २००७ सालको क्रान्ती पछि राजा त्रिभुवनको पालामा राष्ट्रियता माथि ठूलो प्रहार भएको थियो । त्यस पश्चात २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइरहेको छ । यसमा पनि भारतको प्रमुख हात रहेको देखिन्छ । जस्तै ६२÷६३ को आन्दोलनमा संघियताको उच्चारण समेत भएको थिएन् । तर एकाएक भारतको पटनामा सुरेश आले मगर , उपेन्द्र यादव र मातृका यादवलाई पक्राउ गरियो । तर उपेन्द्र यादव बाहेक २ जनालाई नेपाल बुझाइयो । त्यसको ३ महिनापछि नेपालका मधेश आन्दोलन सुरु भएको देखिन्छ । र सोही समयबाटै एक मधेश–एक प्रदेशको माग सहितको विषयहरु उठान भएको थियो । वास्तवमा भारतले इन्दिरा गान्धीको पालैदेखि सिक्कमजस्तै नेपालको तराईका भू–भाग आफ्नो बनाउन चाहन्थ्यो । तर त्यसमा असफल भएपछि भारत अझसम्म विभिन्न बाहनामा नेपाल टुक्र्याउने खेलमा लागेको छ । जसको लागि उसको मधेशी दलको प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो समयनै नेपाली राष्ट्रियताको आन्दोलनमा सबैभन्दा कमजोर भएको मैले विश्लेषण गरेको छु ।
कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के हो त ?
– वास्तवमा यो सबैको दोष नेपाली राजनेताहरुमा जान्छ । यो देशका नेताहरुले कहिल्यै पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीति गरेनन् । उनीहरुले खाली सत्ता र शक्तिको लागि मात्र राजनीति गरे । सत्ता प्राप्तिको लागि जनाताको जिवनस्तर उकास्ने तथा विकास निर्माणको कामलाई भुल्दै गए सत्ता प्राप्तिको लागि देशलाई बिखण्डन गर्ने अभिव्यक्ति दिन समेत उनीहरु पछि परेनन्।जसको कारण नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भयो ।
भनेपछि प्रमुख दोषि नेताहरु नै देखिन्छन् हैन ?
– सही हो, नेताहरु भन्दा पनि विशेष गरी ठुला दलका प्रमुख नेताहरु बढी दोषि देखिन्छन् । त्यसको मतलब सबै नेता दोषि हुन् भनेको पनि होइन । हरेक पार्टिमा त्यस्ता खेमा पनि छन् जसको लक्ष्य र उद्वेश्य भनेकै सत्ता हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा गएको केपी ओली सरकारले भारतको दबाबको विरुद्धमा आफुलाई उभ्याउने प्रयास गरेको छ। राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा जनतालाई जागरुप बनाउने प्रयत्न गरेको छ , त्यो प्रशंसनीय कार्य हो ।
अब राष्ट्रियता बलियो बनाउन के गर्नु पर्ला त ?
अब जनता नजागी राष्ट्रियताको रक्षा हुँदैन । अब हामीले हाम्रो ठाउँबाट राजनीतिक दलले सरकारबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्र रहे जनता रहन्छन् र जनता रहे मात्र दलल रहन्छ भन्ने कुराको राजनीतिक दलले ख्याल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यो समय राष्ट्रियताको संरक्षण गर्दै ग्रेटर नेपालको लागि आन्दोलन गर्ने बेला हो ?
– वास्तवमा अबैध सन्धीमार्फत् नेपालबाट गुमेको ठुलो हिस्सा नेपालले फिर्ता पाउनु पर्छ । सुगौली सन्धि मार्फत् नेपालबाट गुमेको भुभाग फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै देश नै आन्दोलीत हुनुपर्ने बेला आएको छ। ब्रिटिशहरुले सन् १९४७ मा भारत छोड्दा गरेको सन्धिको एउटा बुँदामा सन् १९२३ भन्दा अगाडी नेपाल भारत र तत्कालिन् इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको सम्पुर्ण सन्धि सम्झैता खारेज हुनेछ भनेर लेखिएको छ । यसबाट पनि सुगौली सन्धिको बैधानिकता सकिसकेको प्रमाणित हुन्छ र नेपालबाट गुमेको भुभाग फिर्ता हुनुपर्छ । १०४ वर्ष पछि चिनले हङकङ फिर्ता पाउने, पोर्चुगलको गोवा भारतले फिर्ता पाउने , तर नेपालले नपाउने भन्ने काहिँ हुन्छ ? कस्मीरको सानो भारको लागि भारत र पाकिस्तानको अहिलेसम्म युद्ध भइरहेको छ । तर , नेपालको ६९ ठाउँमा सिमा मिचेर ९० हजार हेक्टर जमिन गुम्दा पनि हामी किन बोल्न सकेनौँ ? तसर्थ अब ग्रेटर नेपालको लागि आन्दोलन अपरिहार्य बनेको छ ।